URoborock ubuyisela kabusha lo mkhakha ngesikhathi se-CES 2022 | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | 10/01/2022 17:39 | Imicimbi, General
I-Roborock, inkampani egxile ekuthuthukisweni nasekukhiqizeni kokubili izicoci zendlu ezingamarobhothi nezingenazintambo, namuhla yethulwe embukisweni we-Consumer Electronics Show 2022. (CES) ifulegi layo elisha, iRoborock S7 MaxV Ultra. Ifaka idokhu entsha yokushaja ehlakaniphile, i-S7 MaxV Ultra isebenza nobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu be-Roborock kuze kube manje ukuletha ukuhlanzwa okusezingeni eliphezulu nokunye okulula nakakhulu.
Isisekelo sokushaja esenza konke: Ukuhambisana ne-Roborock's Drain entsha, i-Flush ne-Fill Base ivumela ukugcinwa kwezandla ukuze kuncishiswe kubasebenzisi. I-mop igeleza ngokuzenzakalelayo phakathi nangemuva kweseshini yokuhlanza, iqinisekisa ukuthi i-S7 MaxV Ultra isilungele ukusebenza kwakho okulandelayo. Isisekelo sokushaja siphinde sizihlanze ngenkathi ugeza i-mop, igcina isiteshi sisesimweni esihle. Futhi, umsebenzi wokugcwalisa othomathikhi wethangi lamanzi uvumela i-S7 MaxV Ultra ukuthi ikhiphe futhi iqhume ifike ku-300m2, 50% ngaphezu kwalabo ababengaphambi kwayo, kuyilapho isikhwama sothuli siqukethe ukungcola kuze kube amasonto ayi-7.
Uhlelo olusha lwe-ReactiveAI 2.0 Lokugwema Izithiyo: Ifakwe inhlanganisela yekhamera ye-RGB, ukukhanya kwe-3D okuhlelekile kanye ne-Neural Processing Unit entsha, i-S7 MaxV Ultra ibona izinto ezisendleleni yayo ngokunembe kakhudlwana futhi ijwayela ngokushesha ukuze zihlanzeke ezizungezile, kungakhathaliseki izimo zokukhanya. Futhi, ibona futhi ibeke ifenisha kuhlelo lokusebenza, okukuvumela ukuthi uqale ukuhlanza ngokushesha amatafula okudlela noma osofa ngokuthinta isithonjana kuhlelo lokusebenza. Ize ihlonze amagumbi nezinto zaphansi, futhi incoma amaphethini okuhlanza afanelekile njengokulandelana, amandla okumunca, namandla okukhuhla. I-S7 MaxV Ultra iqinisekiswe yi-TUV Rheinland ngamazinga ayo okuphepha ku-inthanethi.
Ngobuchwepheshe obudumile be-VibraRise: Idizayinelwe izikhathi zokuhlanza okunganqamuki, i-S7 MaxV Ultra ifaka ubuchwepheshe be-Roborock obaziwa kakhulu be-VibraRise®: inhlanganisela yokukhuhla nge-sonic kanye ne-mop ezikhuphukayo. Ukuhlanza i-Sonic kukhuhla phansi ngamandla amakhulu ukususa ukungcola; kuyilapho i-mop ikwazi ukwenza inguquko ebushelelezi ezindaweni ezihlukene, isibonelo, iphakamisa ngokuzenzakalelayo phambi kokhaphethi.
Ihlanganiswe namandla okudonsa angu-5100pa max, i-S7 MaxV Ultra inikeza ukuhlanzeka okujulile. I-S7 MaxV Ultra (S7 MaxV irobhothi vacuum vacuum pack pack kanye Emptying, Washing and Filling Base), izotholakala eSpain ngentengo yama-euro angu-1399, ngekota yesibili ka-2022. Isicoci sevacuum irobhothi se-S7 MaxV singathengwa ngokwehlukana. ngentengo engu-€799.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » URoborock ubuyisela kabusha imboni ku-CES 2022
I-Doogee V20: intengo nosuku lokukhishwa